WAA MAXAY KARINTA KARAANKA EE JIDHKA: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA - SOOSAARKA DALAGGA
Isticmaalka hoteelka: Guryaha dawooyinka iyo ka hortaga
Xilliga Casriga ah - Miro caan ah oo caan ah, oo qaraabo ah oo caato ah, koraya qaybo kala duwan oo adduunka ah, sida caadiga ah, ee ku yaalla marshland. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah berrito: dhammaantood waa la cuni karaa waxayna ka heleen fiitamiin iyo walxo kale oo faa'iido leh, daaweyn aad u jecel dadka iyo waxyaabo aan waxtar u lahayn karinta.
Calorie, Vitamins iyo Minerals
Cuntadu waa badeeco yar-yar oo calorie ah, laakiin tirada calories ee miro cusub oo la qalajiyey ayaa si aad ah u kala duwan (taas oo la fahmi karo, sababtoo ah qoyaanku wuxuu baxayaa miro inta lagu jiro qalajinta, taas oo keenaysa in miisaan badan la dhimo).
Sidaas, haddii 100 g oo ah nooca berry cusub oo keliya 25 kcal oo keliya, ka dibna miisaanka isku midka ah ee la qalajiyey ayaa ka badan 300 kcal. Tani waa in la xasuustaa kuwa, iyaga oo doonaya in ay miisaanka lumaan, gnaws ah qalalan qaboojiye maalin dhan. Qaadada, dufanka iyo carbohydrates ee qolada astaamaha ayaa ku jira 0,5 : 0,2 : 3,7.
Muuqaal muuqda oo ka mid ah ka kooban kan kanjiirku waa tiro badan pectin. Intaa waxaa dheer, berry oo ku jira sonkorta, anthocyanins, catechins, betain, acids organic - citric, malic, oxalic, ursolic, chlorogenic, amber, oleander iyo kuwa kale.
Ma taqaanaa? Dareemka dhadhanka - dabbaaldegga kaararka ganacsiga. Waxa laga tarjumay Giriigta, magiciisuna macnaheedu maahan wax ka badan "dhanaan". Qaabka iyo midabka casaanka ee midhaha cufan ee ka mid ah quruumaha qaarkood waxay la xidhiidheen dhiigga in geesiyayaashu daadiyeen dagaalka ka dhanka ah xoogga sharka.
Cranberry Prime vitamin - Tani, dabcan, ascorbic acid. Marka la eego qadarka fitamiin C, mirahaas waxay si fiican u tartami karaan liinta. Faytamiin E, Vitamin B (1, 2, 3, 5, 6, 9), fitamiin K1 - phylloquinone waxay ku adkaataa beeraha. Halabuurka macdanta waxaa ka mid ah potassium, fosfooraska, calcium, iyo sidoo kale kuwa kale ee muhiim u ah noolaha noolaha. alaabta - Sulfium, magnesium, copper, manganese, birta, molybdenum, iodine, zinc. Qadar yar oo ah nikkel, lacag, kalayle, kobaltar, chromium, titanium, boron iyo "wakiillada" ee miisaska xilliyaysan ayaa ku jira miraha kuwan.
Beerta xayrta leh
Qalabka faa'iidada leh ee qabsoomayaasha jidhka waxaa lagu go'aamiyaa hal-abuurkiisa gaarka ah. Sidaas berry canab ah:
hagaajinta rabitaanka cuntada iyo, sii kordhinta wax soo saarka miro iyo gasacad qaboojiyaha, kicin nidaamka dheef-shiid kiimikaadka, taas oo muujisay in aysidhka hooseeyo iyo cudurrada qaarkood ee beeryarada;
saameyn ku leh nadaamka kaadida, waxay leedahay saameyn daaweynta lagu durayo, waxay gacan ka geysataa xakameynta horumarinta bakteeriyada cudurkan, sidaas darteed, waxaa lagu tilmaamay ciladaha kelyaha;
hantidii hantida joojiso hannaanka bararka iyo xitaa ka horjoogsanaya horumarinta neoplasms-ka malawadka (gaar ahaan mindhicirrada, qanjidhada naaska iyo prostate);
isu dheellitirka kolesteroolka ee dhiigga, waxay leedahay saameyn ku leh maraakiibta, waxay kicisaa shaqada wadnaha, ka yareeyso madax-xanuun, waa ka hortag fiican oo ka yimaada atherosclerosis iyo strokes;
cusbooneysiin iyo dhiirigelin, harraadin oo hanti waxyeelo leh, oo ay ugu wacan tahay taas oo lagu tilmaamayo cudurrada fayraska neefsiga, hargabka;
dilaan flora waxyeello leh jidhka, waxay leeyihiin saameyn anthelmintic ah (tijaabooyin waxay muujinayaan in xitaa hilibka hilib duuban, taas oo cufnaanta cranberry lagu daray, ka dibna u muuqday in la cuno oo aan sababin calool xanuun).
Casiirka kariimka ah ayaa keenaya faa'iido weyn iyada oo uu ku dhaco infekshinka kaadida, xanuunka qanjirada, cudurada wadnaha, hargab, qufac iyo xitaa hadal afka ah.
Elixir bogsigani waxa kale oo uu awood u leeyahay in uu nadiifiyo nabarrada iyo gubashada gubashada, iyo weliba si loo kordhiyo waxtarka antibiotics.
Waa muhiim! Qaboojiyeyaasha barafaysan waxay ka kooban yahiin ascorbic acid ka badan inta ay qaboobaan, laakiin waxay si buuxda u awoodaan inay ka caawiyaan sidii ay ula qabsan lahaayeen yaraanta fitamiin Guga iyo xoojinta nidaamka difaaca muddadaas.
Cranberry xilliga uurka
Mowduuc gooni ah ayaa ah doorka loo yaqaan 'cranberries' ee nolosha hooyooyinka mustaqbalka. Sidaad ogtahay, cudurrada fayraska iyo cudurada kale ee uur-qaadida inta lagu jiro uurka waxay si gaar ah khatar u yihiin, iyo qaadashada antibiyootikada inta lagu jiro waqtigan waxay noqon kartaa mid aan waxyeeli karin marka loo eego infekshanka laftiisa.
Dhanka kale, jirka dumarka inta uu socdo ilmuhu wuxuu ku jiraa walaac dheeraad ah, sidaas awgeed ayaa gaar ahaan khatar ugu jira inuu fayrasyo ​​saameyn ku yeesho. Intaa waxaa dheer, kelyaha iyo xubnaha kaadida ayaa ah nidaamyada jirka ee inta badan ay saameeyeen xilliga uurka. Xilliga qaboobaha leh bakteeriyada, bakteeriyada anti-inflammatory, kuwaas oo muujinaya labadaba saameynta guud ee jidhka, iyo, gaar ahaan, marka la eego habka jimicsiga, xilliga uurka si fudud oo aan loo meeleyn karin!
Hase yeeshee, taasi maahan. Cabbitaanka sariirtu waxay caawin doontaa hooyada sugeysa inay ka takhalusaan xididdada xajmiga leh ee inta badan soo baxaan muddadan, maaddaama dhirtu ay saameyn aad u faa'iido leh u leedahay shaqada maraakiibta dhiigga. Hanti isku mid ah oo loo yaqaan 'cranberries' waxay xaqiijineysaa caadada wareegga dhiigga ee xuddunta mandheerta, sidaas darteed, waxay ilmaha ka caawisaa inuu caadi ahaan horumariyo.
Cunista inta lagu jiro uurka Xilliga kaabajka, dhoobada, bakteeriyada, bocorka barafka iyo joodariyada qaboobaha ayaa saameyn wanaagsan ku leh jidhka waxayna nuujinaysaa hooyada hooyada uurka leh leh maaddooyin waxtar leh.
Caadi ahaanshaha nidaamyada dheef-shiid kiimikaad, caawimaad ku saabsan isugeynta jirka walxaha macdanta - Dood kale oo ku saabsan xaqiiqada ah in haweenka uurka leh aysan awoodin inay isticmaalaan madax-furan, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin in loo isticmaalo, sababtoo ah ma jirto sabab looga shakiyo ama looga walwalo tan.
Daawo dhaqameedku waxay ogyihiin siyaabo badan oo loo daweeyo qolada. Waxaan u sheegi doonaa kaliya qaar ka mid ah.
Iyada oo difaac daciif ah
Xilliga qaboobaha iyo gaar ahaan guga, marka kaydka fitamiinada ee jirkeena la jaro, waxaa la joogaa waqtiyo lagu daryeelo caafimaad yar. Cunto barafaysan ama midho la qalajiyey ayaa lagu soo dhaweynayaa. Mishiinka miraha ah waxay u baahan yihiin in lagu seexdo darmuuska, ku shub biyo karkaraya, ku adkee oo cab cabir dheeraad ah sonkor ama malab.
Waa muhiim! Weligaa ha ku darin malab cabitaan kulul - maaha kaliya inay dilaan sifooyinka faa'iidada ee badeecada, laakiin sidoo kale waxay u noqotaa sun! Ku rid malab soo galiyey diirran diiran, haddii aad doorbideyso inaad cabto kuleyl, isticmaal malab yar.
Waxaad isticmaali kartaa qaboojiyaha horay ugu dhejisey sonkorta sida "dhar", sidoo kale waxaa jira berri ah qaabkeeda saafi ah, haddii aadan ku wareersan tahay dhadhankiisa.
Xilliga qabow ee hargabka, hargabka, iyo caabuqyada neef-mareenka ee qandhada kaliya ma siinayo jirka qiyaasta cabbirka ee loo baahan yahay xaaladdan fitamiin C, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameynta diaphoretic, waxay ka hortagtaa fuuqbaxa, gaar ahaan khatarta heerkulka jidhka ee sareeya. Waxaa lagu talinayaa in lagu isticmaalo miraha daaweynta. siyaabo sida:
ku shub biyo kulul ilaa qolof jajabiyey oo ku adkee, sida ku cad qaybta hore, cab cabir badan inta lagu jiro maalinta;
diyaariyaan casiirka karamberiga: kudhi miro leh blender, iska tuur faashad, tuujin juuska. Cake ku shub biyo kulul, isku kari ah iyo qabow. Markaas adkee oo isku dar qasac ah. Haddii loo baahdo, ku dar sonkorta ama malab;
Casiirka karamberriga leh ee malab leh sidoo kale waa daaweyn qufac aad u fiican.
Daawooyinka hargabka, dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan in ay cunaan karootada ka badan, radishes, toon, marwo, raspberries, subag iyo madow madow.
Casiirka Cranberry, diyaarisay sida kor lagu sharaxay, aad u fiican caawiyo angina.
Ma taqaanaa? Cuna xanuun - cudur ku dhaca nooca bakteeriyada: waxaa keena streptococci iyo microbes kale oo ku dhejiya xuubka xabka ee cunaha. Taasi waa sababta, sida ka duwan hargabka iyo infekshannada kale ee fayrasyada, cunaha xanuunka iskuma baabi'inayo, daaweyntiisuna waa lagama maarmaan in la qaato daawada antibiyootig ah ee takhtarku soo qoray. Nasiib darro, hal karantiil oo ah dhibaatada dhuunta cunaha lama xalin karo.
Si kastaba ha noqotee, qaboojiyaha waa inuu ahaadaa mid aad u faa'iido leh cudurkan aan fiicneyn, sababtoo ah waxay leedahay hantida si loo xoojiyo saameynta dawooyinka bakteeriyada.
Cranberry waxaa sidoo kale lagu muujiyaa cadaadiska dhiigga oo sarreeya. Sida loo soo saaro balsa, sida kor ku xusan. Intaa waxaa dheer, hoos u dhigista cadaadiska ayaa caawin doona qaadashada casiirka qaboojiyaha - oo saafi ah ama isku qasan isla hal mar oo casiir ah casaan cusub.
Iyada oo ku saleysan qolada qolofka, waxaa jira cuntooyin adag oo adag oo loo isticmaalo hypertension.
Haddii ay dhacdo hypertension, ku dar raaxo madow, jaleeco, zizifus iyo ramson galay cuntadaada.
Daawo dhaqameed ayaa bixisa taladan: Qashinka waxaad u baahan tahay inaad garaacdo kalluun qabow ama midho cusub oo leh koob dhalo ah, ku dar nus litir oo malab ah isku dar ah oo cab cab waliba hal qaado oo saddex jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Haddii aad tuujineysid casiirka ka soo jimicsiga cusub, ha tuurin moofada saliidda ee haray, maaddaama ay tahay hab fiican oo loo kala saaro xididdada dhiigga oo u shaqeynaya shaqada wadnahaaga. Iyada oo ku saleysan bacaha sida, waxaad samayn kartaa compote, oo waxaad kaliya oo calalin sida daawo.
Cranberry waxay caawisaa badanaa calaamadaha sida xaalad xun oo xanuun leh sida cystitiska.
Qarsoodigu waa in uu leeyahay hantida lagu riixayo microbes-ka loo yaqaan "pathogenic pathogens" ka soo derbi-galeenka kaadiheysta, sidaas awgeedna waa in la xiro geedi-socodka bararka. Daaweynta ugu fiican waa casiirka karinta, kaliya waa la tuujiyey: hal galaas oo quraarad ah ka hor cuntada ka hor laba jeer maalintii - waadna fiicantahay!
Cudurada kala goysyada
Xaji-jarista si loo yareeyo xanuunka wadajir ah waxaa lagu qaadaa daawo la mid ah midka loo isticmaalo in lagu daaweeyo dhiig-karka.
Isku qas miiri karootada cusub iyo cabitaanka toonta ee saamiga 5 : 2, Ku adkeyso 24 saacadood, isla mar marka isku dhafan.
Ku dar malab (laba jeer mugga burcadka), mar kale isku dar oo qaado shaaha saddex jeer maalintii 15 daqiiqo cuntada ka hor.
Sida loo isticmaalo kondomoolka
Lama fiirsado alaabta wax ku oolka ah iyo kiknoolajiyada. Maaha wax la yaab leh, sababtoo ah berry dhanaan wuxuu leeyahay saameyn ku leh jirka oo dhan. Laga soo bilaabo soo noq-noqosho, maqaarku wuxuu noqonayaa mid aad u caansan oo dhoobo ah, wuxuu helaa dhalinyaro, jilicsan iyo midab wacan. Sidoo kale, berry wuxuu kaa caawin doonaa in laga takhaluso foosha iyo qallajinta, ka saar barafad aan caafimaad qabin iyo guduudasho, xitaa xayiraan dhacdo aan fiicneyn sida finan. Cranberry waa mid aad u faa'iido leh timo (gaar ahaan nooca dufanka).
Si aad u diyaargarisid kareemka cranberry ee maqaarka saliid leh, waxaad dubtaa liin dhan on a jar, ku shub vodka (250 ml), ka saar meel gudcur ah oo illow toddobaad.
Muddadan ka dib, waxaan xaddidnaa, dareeraha galaas cabitaan casiir leh, 100 ml oo biyo nadiifa ah, qaboojiyey heerkulka qolka, iyo qiyaasta glycerin. Isku qas dhamaan walxaha. Caato ayaa loo isticmaalaa in la tirtiro maqaarka wejiga maalin kasta ka hor wakhtiga jiifka.
Iyadoo ku saleysan miro guduud ah ayaa la kariyaa waji maaskaro. Xidho midhaha ku jira sheyga ama lagu jajabiyay mashiinka oo ku dabool waxyaalihii ka dhashay maqaarka hore loo nadiifiyey.
Iska ilaali rubuc saacad ah, kadibna si tartiib ah ugu maydh biyo diirran. Ku soo celi habka seddex jeer toddobaadkii hal mar.
Xoolaha ayaa sidoo kale isticmaala: Cherry shimbir, caleenta, cananaaska, kiriimka, sinjiga, amaranth, strawberries, radishes, qaraha iyo khudaarta.
Maaskare fudud oo fudud ayaa la samayn karaa si fudud adoo isku qasaya faashad leh cabitaan cusub oo la jarjaray oo la jarjaray 15 daqiiqo. Ku dhaq maaskarada biyo diirran oo diirran kuna dabool habka qoyaanka.
Waa muhiim! Si joogta ah finanka finanku, waxaan kordhinaa wakhtiga soo-gaadhista maaskarada illaa saacad, si kastaba ha ahaatee, xaaladdan kakooban karinta waa in lagu qaso biyo la karkariyey, si tartiib tartiib ah u kordhaya cabitaanka casiirka xalka 1: 3 illaa 1: 1.
Hoyga karinta ee wax lagu karsado: waxa la kariyo, sida loo diyaariyo iyo dukaanka
Xanaanad waxaa loo isticmaalaa maaha oo kaliya daawada iyo qurxinta, laakiin sidoo kale wax lagu karsado: iyada oo ay uga mahadcelinayso dhadhankiisa, waxaa lagu dabaqi karaa oo kaliya macmacaanka iyo cocktails, laakiin sidoo kale saladh iyo suxuunta ugu muhiimsan - hilib iyo kalluun labadaba, oo ay ku jiraan badeecooyin kala duwan.
Dhammaan noocyada kala duwan ee jamciyada, marmalades, miisaanka, jelly, cabitaannada miraayadaha ah, waxsoosaarka iyo kvass, liishursyada iyo liishooyinka looma sheegi karo.
Cuntada waxaa loo isticmaali karaa mid cusub, la qaboojiyey, la qalajiyey, qooyay, iyo xitaa la kariyay. Berry wuxuu abuuraa qaybo gaar ah oo ku yaalla isboorti leh miraha liinta iyo tufaaxa, looska, khudaarta iyo xataa boqoshaada.
Ma taqaanaa? Hsi ay u diyaariso oo u ilaaliso berry waa mid aad u fudud. Ka sokow barafka iyo qalajinta caadiga ah, ikhtiyaarkan soo socda ayaa sidoo kale ku habboon: waxaan ku shubi doonaa miraha nadiifka ah ee dhalooyinka nadiif ah ama xataa dhalooyinka caaga ah ee si fiican loo maydhay, ku shub biyo la kariyey, qaboojiyey heerkulka qolka si taxadar leh ayaannu udoonaa - waanu! Waxyaabaha loo yaqaan 'preservatives' waxaa laga helaa midhaha miraha, sidaa daraadeed karkarin ama waxyaabo gaar ah ayaa loo baahan yahay halkan. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagula talinayaa in lagu kaydiyo badeecadaas miiska, qaboojiyaha ama meel kale oo qabow.
Sauerkraut leh Cranberries - Noocyada noocyada kala duwan. Berry maaha oo kaliya kudheerta jilicsan ee badeecada oo kordhiya qiyaasta fitamiin C ee ku jira, laakiin, isagoo ah ilaaliye fiican, waxay ka caawisaa in lagu keydiyo si ka wanaagsan, ka hortagga halsano iyo dufan. Berry waxaa lagu dari karaa badhidii loo yaqaan 'paste', dhamaystirka badeecada xitaa faa'iidooyinka waaweyn iyo kobcinta dhadhanka.
Cuntada, waxaa lagula talinayaa inaad sameyso saladh fudud oo ah qolofta la qalajiyey, jalaato kalluun iyo digirta digaagga la kariyey, macmacaanka - salad miro leh qolada qolofta leh, xayawaanka ama kalluunka iyo kiriimyada.
Digaagdoonka la dubay ayaa ka ciyaari doona qoraallo gaar ah, haddii aad dalbato suugo karamberka leh tufaaxa. Si aad u diyaariso suugada, ku dhaji 0.5 kg oo ah qaboojiyaha cusub ee digsi ah, jarjar xaleef laba tufaax ah-macaan, nus koob oo sonkor budada ah, qanjaruufo (ama suuf) ee qoraxda iyo biyaha. Soo qaado karkariyo, yareeyo kulaylka iyo karkariyo ilaa qaro weyn. Bon Appetit!
Khilaafka suurtagalka ah
Sida wakiil awood leh, sajiyuhu ma keeni karo faa'idooyin laakiin sidoo kale waxyeello. Midabka cas cas ee berry wuxuu soo jeedinayaa in uu sababi karo xasaasiyad (marka laga reebo, qaar badan oo qaba xanuun aan loo dulqaadan karin ascorbic acid).
Waa muhiim! Inkasta oo faa'iidooyinka berry, inta lagu jiro uurka iyo xitaa inta lagu jiro naas nuujinta ee isticmaalka xargaha, waxaa fiican inaad naftaada xaddido; Sidoo kale laguguma talin inaad siiso ilmaha inta aysan gaarin da'da saddex jirka.
Wixii turki ah iyo urolithiasis, nooca berry waa in la wada baabbi'iyo. dhexdhexaad ah laakiin gastritis-ka iyo boogaha oo ku salaysan astaamaha sii kordhaya ee aaladda dabiiciga ah - ka hortagga tooska ah ee isticmaalka miraha buqashadan.
Si looga fogaado waxyeelada waxyeelada ah ee alaabta saaran tahay derbiyada caloosha, waxaa fiican in la isticmaalo berry dadka sida (xataa xitaa marka dib loo dhigo) ka dib cunnida maqalka.
Ugu dambeyntii, isticmaalka xad-dhaafka ah ee berry dhanaan ayaa si xun u saameyn kara xaaladda ilkahaaga, sidaas darteed afka marka cuntada la cuno waa in ugu yaraan si fiican loo tiriyaa.
Dhammaan wixii is haysta waxay yihiin aad u shardi ah: waxay u yeedhaan oo kaliya in ay leyliyaan taxadar caafimaad leh iyo dareenka saamiga isticmaalka miro, taas oo keeni karta faa'iidooyinka aan la diideynin caafimaadka.
Digaagga Amroks: sifooyinka, daryeelka iyo taranka
Waa maxay sababta xayawaanka lo'da ah?
Sida loo daryeelo peonies, talooyin
Buuxi jigsiga ugu wanaagsan (koronto-korontada)
Siberian Shiksha (Altai Vodyanica): Qalabka daawada iyo isticmaalka daawada
Geedka tufaaxa ee jigjevskoye
Kaabashka waa mid ka mid ah dalagyada khudradda ugu muhiimsan. Waxaa lagu beeray ku dhawaad ​​dhammaan dalalka adduunka oo dhan ujeedada isticmaalka, iyo sidoo kale dhir daawo iyo ornamental ah. Xaqiiqada ah in aan beerta khudradda ka samaysan karin iyada oo aan kaabajarin waxay soo jeedinaysaa in daryeellidda aysan ahayn mid aad u adag. Si kastaba ha noqotee, waxsoosaar dheeraad ah ayaa la heli karaa oo keliya iyada oo la sameynayo abaabulidda waraabinta habboon iyo bacarimis. Read More
Doorasho weyn oo loogu talagalay beerta qurxinta - noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Cosmonaut Volkov"
Sidee loo kariyaa iyo intee in badan oo hadhuudh?